အပြစ်တွေ များလာတဲ့ ဆိုးလ်ရှားကို အချစ်တွေ ပါးလာတဲ့ လင်ဂတ်သတင်းအပါဝင် ယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု…. – Sport Gaber
အပြစ်တွေ များလာတဲ့ ဆိုးလ်ရှားကို အချစ်တွေ ပါးလာတဲ့ လင်ဂတ်သတင်းအပါဝင် ယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု….
လီဗာပူးကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီးမှာ မန်ယူအသင်းရဲ့ နည်းပြရားထူးအတွက် ဆိုးလ်ရှားအရည်အချင်းမပြည့်မှီဘူးဆဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေက ဆိုးလ်ရှားကို မန်ယူအသင်းကနေထွက်အောင် လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါ ပို့စ်တွေထဲက Ole outဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို ဂျက်စီလင်ဂတ်က likeပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လင်ဂတ်ဟာ ဒီရာသီမှာ လူစားဝင်ပြီး ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြသထားနိုင်ပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားကတော့ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်အသုံးမပြုတဲ့ အပြင် လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာ အရံကစားသမားအဖြစ်တောင် အသုံးပြုခဲ့ချင်းမရှိပါဘူး။
ဂျေဒန် ဆန်ချိုကလည်း “မန်ယူအသင်းမှာ ကစားရတာဟာ အသင်းဟောင်းဒေါ့မွန်ထက်စာရင် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေအများကြီးရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားပြော ရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိမန်ယူအသင်းကစားပုံထက် ဒေါ့မွန်အသင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ နှစ်သင်းစလုံးနဲ့လေ့ကျင့်ဖူးပြီး ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကို သေသေချာချာသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မန်ယူအသင်းတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဘွန်ဒတ်လီဂါက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းလိုပဲ တားစီးလို့မရတဲ့ အသင်းဖြစ်လာမှာပါ”လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆန်ချိုဟာလည်း ဆိုးလ်ရှားအသည်းအသန်လိုချင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်​ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ မေဆွန်ဂရင်းဝုဒ်ရဲ့ အရံကစားသမားအဖြစ်သာ ရှိနေပြီး လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာဆို ပါဝင်ကစားခွင့်တောင် မရခဲ့ပါဘူး။ဆန်ချိုဟာ မန်ယူအသင်းအတွက် ၇ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ဂိုးဖန်တီးမှုရော ဂိုးသွင်းမှုပါ မပြုလုပ်နိုင်သေးတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ကစားကွက်၊ လူထုတ်ပုံမမှန်တာကြောင့်သာ ဆန်ချိုအနေနဲ့ ခြေစွမ်းပျောက်နေတာဖြစ်ပြီး ဆန်ချိုဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတစ်ယောက်ဆိုတာတော့ ပါဝင်ကစားခွင့်ရတိုင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ချို့ကိုတော့ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အဝတ်လဲခန်းအတွင်းမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ရော်နယ်ဒိုကလည်း ဆိုးလ်ရှားကို ယုံကြည့်ပြီး ဆက်လက်ထောက်ခံကာ ကြိုးစားကစားပေးကြဖို့ အသင်းရဲ့ ကစားသမားများထံတောင်းဆိုခဲ့သည်။ဖာဂူဆန်ကလည်း ဆိုးလ်ရှားဖက်မှရပ်တည်ပြီး အခွင့်ထပ်မံပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့မှုကြောင့် ဆိုးလ်ရှားကို နောက်ထပ်သုံးပွဲအထိ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ပြီး စပါး၊အတ္တလန်တာနဲ့မန်စီးတီးပွဲစဥ်တို့က ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အရေးပါတဲ့ ပွဲတွေဖြစ်လာမည်။
အေးဂျင့်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဗန်ဒိဘိခ်ဟာလည်း ဇန်နဝါရီလမှာ ထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီး အေးဂျင့်သစ်ကို သူ့အတွက် အသင်းသစ်ရှာပေးရန် ပြောထားကြောင်းသိရပါတယ်။
Previous Article နည်းပြဆိုးလ်ရှားအပေါ် ယုံကြည်မှုမဲ့နေတဲ့ အသင်းသားတွေကို ဖာဂူဆန်နဲ့အတူ အမှာစကားပြောကြားခဲ့တဲ့ – ရော်နယ်ဒို
Next Article ခက်ခက်ခဲခဲ စစ်ရေးလေးကျင့်နေကြသည့် PDF အမျိူးသမီးစစ်သည်များ